အောင်မြင်စေဖို့ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်လေးများ - YOYARLAY Digital Media and News
Published: December 12, 20173:37 am Updated: February 8, 20199:17 am
သင်ဟာ မနက်ခင်းမှာ ကော်ဖီတစ်ခွက် သောက်ခဲ့ပါသလား? ည(၇)နာရီ အလုပ်က အိမ်ပြန်လာချိန် တစ်နေ့တာမှာ သင့်အတွက်မဟုတ်ဘဲ လူတွေအားလုံးအတွက် အချိန်ပေးခဲ့သလို သင်ခံစားမိပါသလား? ဒီလို နေ့ရက်မျိုးတွေ သင်အမြဲပိုင်ဆိုင်ရပါသလား? စိတ်ဖိစီးခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝတွေမှာ အမြဲတမ်းပါဝင်နေတာ ငြင်းလို့မရပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် ရေရှည်မှာ ထိခိုက်မှုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့၊ မနက်ဖြန်နဲ့ နောင်လာမယ့် နေ့ရက်တွေမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ခံစားချက်တွေ ရရှိလာနိုင်စေဖို့ ပြန်လည်အာရုံစိုက်ပြီး ပြန်လည်ချိန်ညှိနိုင်ဖို့ အတွက် ဆောင်ရွက်ရလွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
၁) မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ၊ ချစ်ခင်သူများနှင့် ၅မိနစ်ခန့် ဖုန်းပြောပါ
ကိုယ့်ရဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း ချစ်ခင်ရသူတွေဆီကို နှုတ်ဆက်စကားပြောခြင်း၊ အရေးကြီးတဲ့ ပရောဂျက် ဒါမှမဟုတ် ပွဲတစ်ခုခုအတွက် ဆုတောင်းပေးခြင်းမျိုး စတဲ့ စကားမျိုးလေးတွေကို ၅မိနစ်ခန့် ဖုန်းပြောဆိုပေးပါ။ ဒီလိုမျိုး တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ခဏတဖြုတ် စကားစမြည် ပြောပေးခြင်းဟာ အချိန်လည်းမကုန်စေဘဲ သင့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေကို ရှင်သန် နိုးကြားစေမှာပါ။
၂) စကားပြောတဲ့အခါ လူတွေရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်ပြီးပြောပါ
တစ်ပါးသူ ပြောသော စကားများကို ကိုယ်က နားထောင်တဲ့အခါ အမြင်အာရုံဆက်သွယ်မှုကို အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်သလိုပဲ ကိုယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်း တစ်ပါးသူကို ကြည့်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။ အမြင်အာရုံနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် စကားပြောခြင်းဟာ လူနှစ်ဦးကြား စကားပြောဆိုရာမှာ ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ပေးပြီး ဆက်သွယ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သင့်ကို ယုံကြည်စိတ်ချမှု၊ မိမိကိုယ်မိမိ သတိပြုခြင်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိခြင်းကို ပိုမို ထင်ဟက် စေအောင်လည်း ဖန်တီးပေးပါတယ်။
၃) ၅မိနစ်ခန့် မီးဖိုချောင်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပါ
အချိန်၅မိနစ်အတွင်းမှာ အမှိုက်သွန်လို့ရပါတယ်။ မီးဖိုစင် စားပွဲတွေ သန့်ရှင်းနိုင်ပါတယ်။ မီးဖိုချောင်အတွင်း လှည်းကျင်းနိုင်ပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာအတွင်းက မကောင်းတော့တဲ့ အစားအသောက်တွေ လွှင့်ပစ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်နေတဲ့ မီးဖိုချောင်နေရာလေး အလုပ်တွေလုပ်ပြီး ညစာစားချိန်မှာ ရွှင်မြူးပေါ့ပါးမှုကို ခံစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နေ့စဉ် ၅မိနစ်ခန့် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ပိတ်ရက်တစ်ရက်လုံး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး အချိန်ကုန်သွားတာတွေ လျော့နည်းသွားစေမှာပါ။
၄) နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ချွေးထွက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ
ပြေးခြင်း၊ အလုပ်ကို လမ်းလျှောက်သွားခြင်း၊ ဘတ်စကတ်ဘော ကစားခြင်း၊ အားကစားရုံမှာ လေ့ကျင့်ခြင်း၊ ပရိဘောဂများကို နေရာပြန်စီခြင်း စတဲ့အရာတစ်ခုခုကို ချွေးထွက်သွားအောင် လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ပါ။ ဖျတ်လတ်တက်ကြွခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိစေပါတယ်။
၅) နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ် ဘဏ်စာရင်းရှင်းတမ်း စစ်ဆေးပြီး ဖြတ်တောက်လို့ ရနိုင်မယ့်အသုံးစရိတ်ကို ရွေးချယ်ပါ
လစဉ် ခြေလက်အလှဆင်ခြင်းကို မလုပ်ဘဲ နေနိုင်သလား? ဖုန်းဘေလ် အသုံးပြုခြင်းကို တစ်ဝက်လျှော့နိုင်လား? လျှော့ချလို့ ရနိုင်မယ့်တစ်ခုကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အတွက် သိပ်အရေးမကြီးတဲ့ သေးငယ်တဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် အပိုငွေတွေ စုဆောင်းမိပါလိမ့်မယ်။
တစ်နေ့တစ်နေ့ ယောင်ချာယောင်ချာဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ် ပြုပြင်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ သင့်ရဲ့ဘဝမှာ ကောင်းမွန်တဲ့အရာလေးတွေကို အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ် အလုပ်သွားချိန် ကားပေါ်မှာ အချိန်နည်းနည်းလောက်ရမယ်ဆိုရင် မှတ်စုစာအုပ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း မှတ်စုမှတ် လို့ရနိုင်တဲ့ ဖုန်း app တစ်ခုခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ် သင်ကျေးဇူးတင်ရတဲ့ အရာ(၃)ခုကို ချရေးပါ။ အရမ်းကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ရေးစရာမလိုပါဘူး။ အချက်ကလေးတွေနဲ့ဆိုရင် လုံလောက်ပါတယ်။ ဘဝမှာ ကိုယ်ကျေးဇူးတင်ရမယ့် အရာတွေကို လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားဖို့ အချိန်ပေးခြင်းဟာ သင့်မှာ ရှိတဲ့ ကံကောင်းခြင်းတွေကို ပိုမို အာရုံစိုက်နိုင်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၇) ဖုန်းမပွတ်ဘဲ စာအုပ်ဖတ်ပါ
နာရီဝက်လောက် ဟိုလှည့်ဒီလှည့်နဲ့ အချိန်ကုန်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းဖွင့်ပြီး ဟိုပွတ်ဒီပွတ် အချိန်မကုန်စေဘဲ စာအုပ်လေးတစ်အုပ် ဒါမှမဟုတ်လည်း ဖုန်းနဲ့ဖတ်လို့ရတဲ့ E-book လေးတစ်အုပ်ကို ကောက်ဖွင့်ပါ။ အရေးမပါတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ၊ ကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ သတင်းတွေအစား အကြောင်းအရာလေးတစ်ခု၊ အတွေးအမြင်လေးတစ်ခုမှာ နစ်မျောခြင်းဟာ သင့်ရဲ့စိတ်ကို တည်ငြိမ်စေပြီး ပိုမိုအာရုံစိုက်နိုင်စေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၈) သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေကို ချရေးပါ
သင့်ရဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်တွေကို မှတ်တမ်းပြုနိုင်စေဖို့ မှတ်စုလေးတစ်ခု ထားရှိပါ။ သင်စိတ်ဝင်စားစေမယ့် အရာမျိုး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ချရေးလိုက်ပါ။ ဥပမာ သင်ဟာ ဂစ်တာတီးသင်ဖို့အတွက် ဂစ်တာဝယ်ချင်တာမျိုး၊ ဂျပန်ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်ချင်တာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုလေးတစ်ခု ပုံဖော်ချင်တာမျိုးလေးတွေပေါ့။ သင့်ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်လေးတွေကို ဘောပင်နဲ့ ချရေးလိုက်ခြင်းဟာ ဒီအိပ်မက်တွေကို ရယူနိုင်အောင် ပိုမိုလုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်လို့ လေ့လာချက်များမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
၉) အိပ်ရာထချိန် ရေတစ်ဖန်ခွက်အပြည့်သောက်ပါ
ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းလိုက်ပါ။ အေးတဲ့ရေဖြစ်ဖြစ် ပူတဲ့ရေဖြစ်ဖြစ် သံပရာပဲပါပါ ပျားရည်ပဲပါပါ မနက်ခင်းမှာ ရေတစ်ဖန်ခွက် အပြည့် သောက်သုံးခြင်းဟာ သင့်ကို ရှင်သန်လတ်ဆတ်ခြင်းကို ပေးစွမ်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇီဝကမ္မဗေဒကို နိုးကြားတက်ကြွစေပြီးတော့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ တစ်နေ့တာလုံး ရေသောက်သွားအောင်လည်း ကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Ref : Knowledge : 20 Easy Things You Can Do to Improve Your Life
Previous Previous post: IU ရဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲကို လာရောက် အားပေးတဲ့ Song-Song စုံတွဲ
Next Next post: ဂျပန်နိုင်ငံက တာဝေးပစ်ဒုံးကျည်တွေကို ပထမမဆုံးအကြိမ် ဝယ်မယ်
မျက်မှန်တပ်လေ့ ရှိတဲ့သူတွေဟာ မျက်မှန်လေးတပ်ထားမှ သူတို့ရဲ့ မျက်နှာပုံစံလေးနဲ့ ပိုမိုလှပ လိုက်ဖက်တယ်လို့ ခံစားရစေတာပါ။ Post Views: 1,523